FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHIH APSO - ALIKA
Lhasa Apso / Shih Tzu Alika mifangaro
Pogi ilay alika mpamonjy Shih Apso amin'ny 2 ½ taona— 'Be fitiavana izy, miaro ary manimba. Tena marani-tsaina koa izy ary mianatra fika vaovao haingana. Somary maditra sy mankahala ny irery amin'ny hadisoana iray. '
Ny Shih Apso dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Shih Tzu ary ny Lhasa Apso . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Voavonjy i Butler a Lhasa Apso SY Shih Tzu afangaro amin'ny 5 taona
Brindle the Shih Apso (mix Lhasa Apso / Shih Tzu) amin'ny 2 herinandro - jereo Brindle aseho etsy ambony rehefa niova loko ny palitao
Brindle, ilay Shih Apso (mix Lhasa Apso / Shih Tzu) mandritra ny 4 herinandro — jereo ny Brindle aseho etsy ambony rehefa niova loko ny palitao
Brindle the Shih Apso (mix Lhasa Apso / Shih Tzu) eo amin'ny 3 volana eo ho eo
Brindle the Shih Apso (mix Lhasa Apso / Shih Tzu) sahabo ho 1 taona eo ho eo ny palitaony dia manomboka mampiseho fambara miova loko.
Brindle ilay Shih Apso 18 volana (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) na mino ianao na tsia, teraka Brindle tamin'ny fandokoana i Brindle, ka io no anarany. Ny fiovan'ny lokon'ny akanjo dia mahazatra ao anatin'ny karazany Lhasa Apso. Jereo eto ambany ireo sarin'i Brindle hafa. Izy dia iray amin'ireo pup fito avy amin'ny fako. Ny tohodrano dia ny Lhasa mahazatra - volom-bolo, tarehy fotsy. Ny sire dia tricolor - Shih-Tzu mainty / volontany / fotsy. Nisy alika kely telo toa an'i Brindle, mainty iray madio ary fotsy ny tratrany ary trisolor telo. Vehivavy efatra, lahy iray. Ny lanjany dia avy amin'ny 15 pounds ka hatramin'ny 22 pounds. Brindle no alika lehibe indrindra amin'ny fako. Vazivazy ny tompony, 'Toa manana fanamby amin'ny karazany izy. Matetika izy dia manao zavatra toy ny saka. Manizingizina ny mpitsabo biby sy ny mpiompy fa manana alika aho. Izy io dia 'tenona.' Somary terery izy. Hodinihiny tsara toy ny Goldens efa nananako izy, nefa te hamono azy avy eo. TSY alika rano, fa tia mandro sy fikarakarana. Mahafinaritra ny misavoritaka. '
Hoy koa izy: Ny fitondran-tena 'alika dia' dia efa nandany 9-10 volana. Nandeha tsara ny vaky trano. Tamin'ny 4 volana dia nidina ambany ny lozam-pifamoivoizana. Efa nanao ny fiofanana crate tamin'ny alikako izay manampy be dia be. Na izany aza, ny mpanadio karipetra dia sakaizanao. Araka ny nomarihin'i Barbara Bush, ny alika kely sy ny karipetra dia fifangaroana ratsy.
'Na izany aza, nanana olana aho nandritra ny 4 volana. Nifoha tamin'ny 4 maraina i Pup ary nanao tabataba. Nentiny nivoaka izy. Tsy misy. Hita fa nanirery fotsiny izy. Tratra izany, ka nitondra azy teo am-pandriana niaraka tamintsika. Miresaka amin'ny lehilahy iray manana fandriana mitovy habe amin'ny mpanjaka ianao mba hisy toerana bebe kokoa ho an'ny alika. Tsy fantany izay atao hoe fandriana alika. Misy ihany ny mety hihoarantsika ny filaharana hatrany an-tsokosoko ka hatramin'ny fandrobana ... -) Izy izao dia ampifandraisiny miaraka amintsika mandritra ny ora vitsivitsy, ary mitodika any ambanin'ny farafara izy raha maheno ny varavarana vata. Mila mampiasa kifafa aho hamoahana azy avy eo ambanin'ny fandriana ... tsy sary tsara tarehy .... alika be loatra. Heveriko fa mifanaraka amin'ny toetran'ny terrier sy watchdog io. '
Ireto ambany ireto ny sariny fony izy mbola kely. 'Tsy ho fantatrao io alika io ihany. Vita izao ny fanovana loko. Miloko krema tanteraka izy, miaraka amin'ny tarehy / volombava volondavenona. Volom-borona tena tsara, izay manana fironana mat. Mampiasa 'detangler' aho hitandrina azy io, ary mila mikarakara azy isan'andro. Ny toetra maha-olona dia azo antoka fa fifangaroan'ny karazany roa. Te hipetraka eo am-pofoanao ary hiambina ny entanao! '
'Mbola afaka mahita ny sasany amin'ireo marika volontsôkôlà ianao. Mbola manana volo mpiambina mainty izy raha avelako handeha ela izy. Ny ady dia eo anelanelan'ny volo tena tsara sy lava ary mampifanaraka ny olana. '
Coco the Lhasa Apso / Shih Tzu mix (Shih Apso) alika kely amin'ny 9 herinandro
Coco the Lhasa Apso / Shih Tzu mix (Shih Apso) amin'ny 5 volana
Enzo the Shih Apso amin'ny 1½ taona— 'Nahazo azy ho fanomezana avy amin'ny namana iray izahay, izay tompon'ny rainy Lhasa Apso madio! Ny reniny dia Shih Tzu madio. Enzo dia manana ny fijery sy ny toetran'ny Lhasa ary nanontany tena aho raha tena Shih Tzu ny reniny… LOL. Lehilahy tena saro-piaro izy ary somary sosotra sy mahery setra, saingy tiako izy araka ny toetrany! '
Enzo the Shih Apso puppy amin'ny 3 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shih Apso
Shih Apso Sary
lab shar pei mifangaro toetra
poodle afangaro amin'ny alika kely chihuahua
chihuahua miharo alika weenie
laboratoara bulldog afangaro alika kely amidy